‘मधेश इज नट नेपाल’ भन्दै चर्को भाषण गरे सिके राउत, मूकदर्शक बने प्रहरी ! - Everest Dainik - News from Nepal
‘मधेश इज नट नेपाल’ भन्दै चर्को भाषण गरे सिके राउत, मूकदर्शक बने प्रहरी !
जनकपुर, असोज ३ ।
विप्लप माअाेवादीका प्रवक्ता प्रकाण्डलार्इ राज्य विराेधी गतिविधिमा संलग्न भएकाे अाराेपमा अदालतकाे अादेश विपरित पाचाैं पटकसम्म गिरफ्तार गरी मुद्दा चलाएकाे सरकारले सिके राउतले ‘मधेश नेपाल नभएकाे’ भन्दै चर्काे भाषण गरे, नेपाल प्रहरी मूकदर्शक बन्याे ।
प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका सिके राउतले हजारौं कार्यकर्ताको बीचमा संविधानको विरोधमा बोलेका छन्। जनकपुरको ‘रामानन्द चोक’मा राउतले भाषण गर्दै गर्दा प्रहरी भने मूकदर्शक बनेको छ। मंगलबार साँझसम्म राउतको खोजी भइरहेको बताएको जनकपुर प्रहरी उनले मुख्य चोकमा उपस्थित हुँदा गर्दा मूकदर्शक बनेको हो।
याे पनि पढ्नुस धनगढीमा पनि संविधान दिवसलार्इ 'कालाे दिन' घाेषणा
संविधान दिवसकै दिन स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका राउतले प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरकै मुख्य चोकमा संविधानको चर्को विरोध गर्दै भाषण गरेका हुन्।
सिके राउतले जनकपुरमा भाषण गर्दा उता रुपन्देहीको गैडहवामा आमसभा भएको छ। राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश संगठनले आफ्ना कार्यकर्ता राममनोहर यादवको श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रमसहित कालो संविधान भन्दै विरोध सभा गरेको हो।
समाचार : अन्नपूर्णपोष्ट
ट्याग्स: CK Rawat, Constitution Day